ဝိတ်ကျစေမယ့် ဗီတာမင်နဲ့ သတ္တုဓာတ်တွေက ဘာတွေဖြစ်မလဲ - သစ်ထူးလွင် (နေ့စဉ်သတင်း) '; summ = summary_img; } var summary = imgtag + '
ဝိတ်ကျစေမယ့် ဗီတာမင်နဲ့ သတ္တုဓာတ်တွေက ဘာတွေဖြစ်မလဲ
ဝိတ်ချတယ်ဆိုရင် အများစုကတွေးမိတာက အစားလျှော့စားလိုက်ဖို့ပါ။ တကယ်တော့ တစ်ခါတလေမှာ အစားလျှော့စားတိုင်းလည် ဝိတ်ကျစေတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျန်းမာစွာနဲ့ ဝိတ်ကျချင်ရင် အခုပြောတဲ့ ဗီတာမင်နဲ့သတ္တုဓာတ်လေးတွေကို အားကိုးကြည့်ဖို့ပြောပါရစေနော်။
ဝိတ်ချတယ်ဆိုတာက ပြောသလောက်လွယ်တဲ့ ကိစ္စတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ဆေးလေးသောက်လိုက်ရုံ၊ အစားလေးလျှော့လိုက်ရုံ၊ လေ့ကျင့်ခန်းလေးလုပ်လိုက်ရုံတင်လားဆိုတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ အားလုံးကို မျှတအောင်လုပ်မှ ကျန်းမာစွာနဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်ကျလို့ ကျစ်လျစ်သွယ်လျသွားမှာပါ။ ဝိတ်ချနေချိန်မှာ မေ့ထားလို့မဖြစ်တာက ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်စွာဝိတ်ကျစေဖို့အတွက် ခန္ဓာကိုယ်မှာ လိုအပ်တဲ့ ဗီတာမင်နဲ့ သတ္တုဓာတ်တွေ ပြည့်ဝနေစေဖို့ပါ။ ဒါမှလည်း ကျန်းမာစွာနဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်ချနိုင်တော့မှာပေါ့။ နောက်တစ်ခုက အချို့ဗီတာမင်နဲ့ သတ္တုဓာတ်တွေက ဝိတ်မတက်စေဘဲ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်လို့ မလိုအပ်တဲ့ အဆီပိုတွေကို ထိထိရောက်ရောက် ဖယ်ရှားပေးနိုင်တယ်ဆိုတာပါ။
ဝိတ်ကျစေဖို့ ကူညီပေးမယ့် ဗီတာမင်တွေက ဘာတွေဖြစ်မလဲ
ဒီဗီတာမင်တွေ ဝိတ်ကျစေဖို့ တကယ်ကို အထောက်အကူပြုနိုင်မှာပါ။
(၁) ဗီတာမင် B – ဗီတာမင် B ဆိုတဲ့နေရာမှာ ဗီတာမင် B အုပ်စုဝင်တွေဖြစ်တဲ့ သီရာမင်း (ဗီတာမင် B1)၊ ရီဗိုဖလာဗင် (ဗီတာမင် B2)၊ နီကာဆင် (ဗီတာမင် B3)၊ pantothenic acid(ဗီတာမင် B5)၊ pyridoxine(ဗီတာမင် B6)၊ ဘိုင်အိုတင် (ဗီတာမင် B7)၊ ဖောလိတ် (ဗီတာမင် B9)၊ cobalamin (ဗီတာမင် B12) တို့ပါဝင်နေတာပါ။ ဗီတာမင် B အုပ်စုတွေက ကိုယ်တွင်းက ဇီဝကမ္မလုပ်ငန်းစဉ်တွေကို အကောင်းဆုံး လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်စေပြီး စားသုံးလိုက်တဲ့ ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်၊ ပရိုတင်းနဲ့ အဆီတွေကို အကောင်းဆုံးဖြိုခွဲပေးပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ဆောင်ပေးမှုက ဝိတ်ကျစေဖို့ အကောင်းဆုံးတွန်းအားပေးနိုင်မှာပါ။
ဘာတွေစားရမလဲ…. ပဲအမျိုးမျိုး၊ ပဲနီလေး၊ နို့၊ ဥအမျိုးမျိုး၊ အဆီမပါတဲ့အသား၊ အာလူး၊ ငှက်ပျောသီးတို့ကို စားသုံးပေးသင့်ပါတယ်။
(၂) ဗီတာမင် D – ကိုယ်ခံအားကောင်းစေဖို့ အရေးပါတဲ့ ဓာတ်တစ်ခုပေါ့။ ယနေ့ခေတ်မှာ လူတော်တော်များများက နေရောင်နဲ့ ထိတွေ့မှုနည်းလာကြပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ဗီတာမင် D ရရှိဖို့ ခဲယဉ်းလာကြပါတယ်။ ဗီတာမင် D ကိုရရှိနိုင်တဲ့ အဓိကရင်းမြစ်က နေရောင်ခြည်ပါ။ ဗီတာမင် D ရရှိမှုနည်းပါးတာက အဝလွန်စေနိုင်သလို စိတ်ဓာတ်ကျမှုကိုလည်း ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဗီတာမင် D ကို လုံလောက်စွာရရှိအောင် လုပ်ဆောင်နိုင်မှုကလည်း ဝိတ်ကျစေဖို့ အထောက်အကူပြုပေးနိုင်မှာပါ။
ဘာတွေစားရမလဲ….. ဗီတာမင် D ကို အဓိကရရှိစေနိုင်တာက နေရောင်ခြည်ပါ။ ဒါပေမယ့် ဆာဒင်းငါး၊ တူနာငါး၊ ဆယ်လ်မွန်ငါး၊ ကြက်ဥအနှစ်၊ ဗီတာမင် D ဖြည့်စွက်ထားတဲ့ နို့နဲ့ဒိန်ချဉ်တွေကို စားပေးလို့လည်း ရပါတယ်။
(၃) သံဓာတ် –စားလိုက်တဲ့ အစာအာဟာရတွေကို စွမ်းအင်အဖြစ်ပြောင်းလဲဖို့ အကောင်းဆုံး ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပါတယ်။ သံဓာတ်က ခန္ဓာကိုယ်က ဆဲလ်တွေဆီကို အောက်ဆီဂျင်ရောက်ရှိအောင် ပို့ဆောင်ပေးသလို ကြွက်သားတွေဆီကိုလည်း အောက်ဆီဂျင်ကို ပို့ဆောင်ပေးပါတယ်။ သံဓာတ်ရဲ့ နောက်ထပ်အားသာချက်တစ်ခုက အဆီတွေကို လောင်ကျွမ်း စေနိုင်တာပါပဲ။
ဘာတွေစားရမလဲ…….အဆီမပါတဲ့ အသား၊ အခွံမာပင်လယ်စာတွေ၊ ပဲအမျိုးမျိုး၊ ဟင်းနုနွယ်ရွက်တို့ကို စားပေးလို့ရပါတယ်။
(၄) မဂ္ဂနီဆီယမ် –ခန္ဓါကိုယ်အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ သတ္တုဓာတ်တစ်မျိုးပေါ့။ သွေးတွင်းသကြားဓာတ် ထိန်းညှိဖို့၊ သွေးပေါင်ချိန်ထိန်းညှိဖို့၊ အရိုးတွေ သန်မာစေဖို့၊ အာရုံကြောစနစ်တွေ အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်နိုင်စေဖို့ ထောက်ပံ့ပေးပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ကို မလိုအပ်ဘဲ ကိုယ်အလေးချိန်မတက်စေဖို့ဆိုရင် ဒီသတ္တုဓာတ်ကိုလည်း မေ့ထားလို့မဖြစ်ပါဘူး။
ဘာတွေစားရမလဲ……. အခွံမာသီးတွေ၊ အစေ့အဆံတွေ၊ ပဲတောင့်ရှည်၊ ဟင်းနုနွယ်လိုမျိုး အစိမ်းရင့်ရောင် ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကို စားပေးဖို့လိုပါမယ်။
(၅) ကယ်လ်ဆီယမ် –ငယ်စဉ်ကတည်းကစပြီး အသက်ကြီးတဲ့အထိ ကယ်လ်ဆီယမ်က အရေးပါတဲ့ အခန်းကဏ္ဍကနေ ပါဝင်နေပါတယ်။ အရိုးနဲ့သွားတွေကြံ့ခိုင်သန်စွမ်းစေဖို့ ထောက်ပံ့ပေးသလို ကယ်လ်ဆီယမ်ကို လိုအပ်တဲ့ ပရိုတင်းနဲ့ သင့်တင့်မျှတအောင် စားသုံးပေးမယ်ဆိုရင် ကယ်လ်လိုရီတွေကို အထိရောက်ဆုံး လောင်ကျွမ်းပေးနိုင်မှာ အသေအချာပါ။ ကယ်လ်ဆီယမ်ကို ကယ်လ်လိုရီနည်းတဲ့ အစားအသေက်ာတွေနဲ့ တွဲဖက်စားသုံးပေးမှုက လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်စရာမလိုဘဲ ခန္ဓာကိုယ်က အဆီတွေကို လောင်ကျွမ်းစေနိုင်မှာပါ။ ဒါကြောင့် ကိုယ်အလေးချိန်ကို လျှော့ချချင်တယ်ဆိုရင် ကယ်လ်ဆီယမ်ကိုလည်း မေ့ထားလို့ မဖြစ်ပါဘူး။
(၆) Omega-3 fatty acids –ဝိတ်ကျစေဖို့ အကောင်းဆုံး အထောက်အပံ့ပေးနိုင်ပါတယ်။ omega-3 fatty acids က ကိုယ်တွင်းက အဆီပိုတွေကို ဖယ်ရှားပေးတဲ့အပြင် နှလုံးကျန်းမာအောင် ထောက်ပံ့ပေးပါတယ်။ သွေးကြောလေးတွေကို ကျန်းမာစေနိုင်ပြီး ရောဂါတစ်ခုခုကြောင့် နှလုံးနဲ့ သွေးကြောလေးတွေ ထိခိုက်မှုမဖြစ်အောင်လည်း အကောင်းဆုံး ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ဘာတွေစားရမလဲ……. ဆယ်လ်မွန်၊ မက်ကာရယ်၊ ထရောက်ငါး၊ ဆာဒင်း၊ တူနာ တို့ကို စားသုံးပေးလို့ ရပါတယ်။
ဝိတျကစြမေယျ့ ဗီတာမငျနဲ့ သတ်တုဓာတျတှကေ ဘာတှဖွေဈမလဲ
ဝိတျခတြယျဆိုရငျ အမြားစုကတှေးမိတာက အစားလြှော့စားလိုကျဖို့ပါ။ တကယျတော့ တဈခါတလမှော အစားလြှော့စားတိုငျးလညျ ဝိတျကစြတောတော့ မဟုတျပါဘူး။ ကနျြးမာစှာနဲ့ ဝိတျကခြငျြရငျ အခုပွောတဲ့ ဗီတာမငျနဲ့သတ်တုဓာတျလေးတှကေို အားကိုးကွညျ့ဖို့ပွောပါရစနေျော။
ဝိတျခတြယျဆိုတာက ပွောသလောကျလှယျတဲ့ ကိစ်စတော့မဟုတျပါဘူး။ ဆေးလေးသောကျလိုကျရုံ၊ အစားလေးလြှော့လိုကျရုံ၊ လကေ့ငျြ့ခနျးလေးလုပျလိုကျရုံတငျလားဆိုတော့ မဟုတျပါဘူး။ အားလုံးကို မြှတအောငျလုပျမှ ကနျြးမာစှာနဲ့ ကိုယျအလေးခြိနျကလြို့ ကဈြလဈြသှယျလသြှားမှာပါ။ ဝိတျခနြခြေိနျမှာ မထေ့ားလို့မဖွဈတာက ကနျြးမာရေးနဲ့ ညီညှတျစှာဝိတျကစြဖေို့အတှကျ ခန်ဓာကိုယျမှာ လိုအပျတဲ့ ဗီတာမငျနဲ့ သတ်တုဓာတျတှေ ပွညျ့ဝနစေဖေို့ပါ။ ဒါမှလညျး ကနျြးမာစှာနဲ့ ကိုယျအလေးခြိနျခနြိုငျတော့မှာပေါ့။ နောကျတဈခုက အခြို့ဗီတာမငျနဲ့ သတ်တုဓာတျတှကေ ဝိတျမတကျစဘေဲ ကနျြးမာရေးနဲ့ ညီညှတျလို့ မလိုအပျတဲ့ အဆီပိုတှကေို ထိထိရောကျရောကျ ဖယျရှားပေးနိုငျတယျဆိုတာပါ။
ဝိတျကစြဖေို့ ကူညီပေးမယျ့ ဗီတာမငျတှကေ ဘာတှဖွေဈမလဲ
ဒီဗီတာမငျတှေ ဝိတျကစြဖေို့ တကယျကို အထောကျအကူပွုနိုငျမှာပါ။
(၁) ဗီတာမငျ B – ဗီတာမငျ B ဆိုတဲ့နရောမှာ ဗီတာမငျ B အုပျစုဝငျတှဖွေဈတဲ့ သီရာမငျး (ဗီတာမငျ B1)၊ ရီဗိုဖလာဗငျ (ဗီတာမငျ B2)၊ နီကာဆငျ (ဗီတာမငျ B3)၊ pantothenic acid(ဗီတာမငျ B5)၊ pyridoxine(ဗီတာမငျ B6)၊ ဘိုငျအိုတငျ (ဗီတာမငျ B7)၊ ဖောလိတျ (ဗီတာမငျ B9)၊ cobalamin (ဗီတာမငျ B12) တို့ပါဝငျနတောပါ။ ဗီတာမငျ B အုပျစုတှကေ ကိုယျတှငျးက ဇီဝကမ်မလုပျငနျးစဉျတှကေို အကောငျးဆုံး လုပျဆောငျပေးနိုငျစပွေီး စားသုံးလိုကျတဲ့ ကာဗိုဟိုကျဒရိတျ၊ ပရိုတငျးနဲ့ အဆီတှကေို အကောငျးဆုံးဖွိုခှဲပေးပါတယျ။ ဒီလိုလုပျဆောငျပေးမှုက ဝိတျကစြဖေို့ အကောငျးဆုံးတှနျးအားပေးနိုငျမှာပါ။
ဘာတှစေားရမလဲ…. ပဲအမြိုးမြိုး၊ ပဲနီလေး၊ နို့၊ ဥအမြိုးမြိုး၊ အဆီမပါတဲ့အသား၊ အာလူး၊ ငှကျပြောသီးတို့ကို စားသုံးပေးသငျ့ပါတယျ။
(၂) ဗီတာမငျ D – ကိုယျခံအားကောငျးစဖေို့ အရေးပါတဲ့ ဓာတျတဈခုပေါ့။ ယနခေ့တျေမှာ လူတျောတျောမြားမြားက နရေောငျနဲ့ ထိတှမှေု့နညျးလာကွပါတယျ။ ဒါကွောငျ့လညျး ဗီတာမငျ D ရရှိဖို့ ခဲယဉျးလာကွပါတယျ။ ဗီတာမငျ D ကိုရရှိနိုငျတဲ့ အဓိကရငျးမွဈက နရေောငျခွညျပါ။ ဗီတာမငျ D ရရှိမှုနညျးပါးတာက အဝလှနျစနေိုငျသလို စိတျဓာတျကမြှုကိုလညျး ဖွဈစနေိုငျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ဗီတာမငျ D ကို လုံလောကျစှာရရှိအောငျ လုပျဆောငျနိုငျမှုကလညျး ဝိတျကစြဖေို့ အထောကျအကူပွုပေးနိုငျမှာပါ။
ဘာတှစေားရမလဲ….. ဗီတာမငျ D ကို အဓိကရရှိစနေိုငျတာက နရေောငျခွညျပါ။ ဒါပမေယျ့ ဆာဒငျးငါး၊ တူနာငါး၊ ဆယျလျမှနျငါး၊ ကွကျဥအနှဈ၊ ဗီတာမငျ D ဖွညျ့စှကျထားတဲ့ နို့နဲ့ဒိနျခဉျြတှကေို စားပေးလို့လညျး ရပါတယျ။
(၃) သံဓာတျ –စားလိုကျတဲ့ အစာအာဟာရတှကေို စှမျးအငျအဖွဈပွောငျးလဲဖို့ အကောငျးဆုံး ထောကျပံ့ပေးနိုငျပါတယျ။ သံဓာတျက ခန်ဓာကိုယျက ဆဲလျတှဆေီကို အောကျဆီဂငျြရောကျရှိအောငျ ပို့ဆောငျပေးသလို ကွှကျသားတှဆေီကိုလညျး အောကျဆီဂငျြကို ပို့ဆောငျပေးပါတယျ။ သံဓာတျရဲ့ နောကျထပျအားသာခကျြတဈခုက အဆီတှကေို လောငျကြှမျး စနေိုငျတာပါပဲ။
ဘာတှစေားရမလဲ…….အဆီမပါတဲ့ အသား၊ အခှံမာပငျလယျစာတှေ၊ ပဲအမြိုးမြိုး၊ ဟငျးနုနှယျရှကျတို့ကို စားပေးလို့ရပါတယျ။
(၄) မဂ်ဂနီဆီယမျ –ခန်ဓါကိုယျအတှကျ မရှိမဖွဈလိုအပျတဲ့ သတ်တုဓာတျတဈမြိုးပေါ့။ သှေးတှငျးသကွားဓာတျ ထိနျးညှိဖို့၊ သှေးပေါငျခြိနျထိနျးညှိဖို့၊ အရိုးတှေ သနျမာစဖေို့၊ အာရုံကွောစနဈတှေ အကောငျးဆုံးလုပျဆောငျနိုငျစဖေို့ ထောကျပံ့ပေးပါတယျ။ ခန်ဓာကိုယျကို မလိုအပျဘဲ ကိုယျအလေးခြိနျမတကျစဖေို့ဆိုရငျ ဒီသတ်တုဓာတျကိုလညျး မထေ့ားလို့မဖွဈပါဘူး။
ဘာတှစေားရမလဲ……. အခှံမာသီးတှေ၊ အစအေ့ဆံတှေ၊ ပဲတောငျ့ရှညျ၊ ဟငျးနုနှယျလိုမြိုး အစိမျးရငျ့ရောငျ ဟငျးသီးဟငျးရှကျတှကေို စားပေးဖို့လိုပါမယျ။
(၅) ကယျလျဆီယမျ –ငယျစဉျကတညျးကစပွီး အသကျကွီးတဲ့အထိ ကယျလျဆီယမျက အရေးပါတဲ့ အခနျးကဏ်ဍကနေ ပါဝငျနပေါတယျ။ အရိုးနဲ့သှားတှကွေံ့ခိုငျသနျစှမျးစဖေို့ ထောကျပံ့ပေးသလို ကယျလျဆီယမျကို လိုအပျတဲ့ ပရိုတငျးနဲ့ သငျ့တငျ့မြှတအောငျ စားသုံးပေးမယျဆိုရငျ ကယျလျလိုရီတှကေို အထိရောကျဆုံး လောငျကြှမျးပေးနိုငျမှာ အသအေခြာပါ။ ကယျလျဆီယမျကို ကယျလျလိုရီနညျးတဲ့ အစားအသကျောတှနေဲ့ တှဲဖကျစားသုံးပေးမှုက လကေ့ငျြ့ခနျးလုပျစရာမလိုဘဲ ခန်ဓာကိုယျက အဆီတှကေို လောငျကြှမျးစနေိုငျမှာပါ။ ဒါကွောငျ့ ကိုယျအလေးခြိနျကို လြှော့ခခြငျြတယျဆိုရငျ ကယျလျဆီယမျကိုလညျး မထေ့ားလို့ မဖွဈပါဘူး။
(၆) Omega-3 fatty acids –ဝိတျကစြဖေို့ အကောငျးဆုံး အထောကျအပံ့ပေးနိုငျပါတယျ။ omega-3 fatty acids က ကိုယျတှငျးက အဆီပိုတှကေို ဖယျရှားပေးတဲ့အပွငျ နှလုံးကနျြးမာအောငျ ထောကျပံ့ပေးပါတယျ။ သှေးကွောလေးတှကေို ကနျြးမာစနေိုငျပွီး ရောဂါတဈခုခုကွောငျ့ နှလုံးနဲ့ သှေးကွောလေးတှေ ထိခိုကျမှုမဖွဈအောငျလညျး အကောငျးဆုံး ကာကှယျပေးနိုငျပါတယျ။
ဘာတှစေားရမလဲ……. ဆယျလျမှနျ၊ မကျကာရယျ၊ ထရောကျငါး၊ ဆာဒငျး၊ တူနာ တို့ကို စားသုံးပေးလို့ ရပါတယျ။